(tonga teto avy amin'ny Bahāʾ-Allāh)
I Bahá'u'lláh no mpanorina ny finoana bahay. Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī no anarany, teraka tao amin' ny faritanin' i Mazanderan any Iràna tamin' ny 12 Novambra 1817 tao amin' ny fianakavian' andriana iray. Niasa tao amin' ny governoran' ny shah ao Iràna ny rainy. Rehefa maty ny rainy dia saika hatao mpandimby azy ao amin' ny lapan' ny mpanjaka i Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī. Tsy nanaiky anefa izy mba hahafahany manokana ny fotoany amin' ny fanampiana ny olona ianjadian' ny tsindrihazolena sy ny marary ary ny mahantra, sady hiaro ny rariny. Nikambana tamin' ny babisma izy tamin' ny faha-30 taonany. Tamin' ny taona 1852 dia nosamborina izy sy nasesitany tany Bagdad izay niankina tamin' ny fanjakana ôtômàna.
Afaka 10 taona tany an-tsesitany tao Bagdad izy, tamin' ny faha-12 andron' ny fankalazana ny fetin' ny Riḍvān, izay nanomboka tamin' ny 22 Avrily hatramin' ny 03 Mey 1863, dia nilaza tamin' ny manodidina azy fa izy no ilay nambara fa ho tonga, araka ny filazàn' ny Bāb mialoha, dia ilay "fisehoana" fara tampon' Andriamanitra nadrasan' ireo fivavahana monoteista sasany. Nanomboka nahangona mpianatra izy, sady nanana eritreritra ny hanorina fivavahana ho an' ny olona rehetra eran-tany, izay hisehon' ny fahatanterahana tongalafatra amin' ny fivavahana rehetra nisy hatramin' izay sady ho vatofehizoron' ny fanjakan' ny fandriampahalemana sy ny fahamarinana sy ny fahafahana ary ny olombelona eto an-tany. Voatery nandao an' i Bagdad i Bahāʾ-Allāh ka nankany Konstantinopoly, avy eo nankany Edirne (any Torkia amin' izao) tamin' ny taona 1864 ary farany tany Acre (ao Israely amin' izao fotoana izao), avy eo tao amin' ny vilayet tao Damasy na Damaskosy (ao Siria akehitriny).
Nananao ny toriteniny tamin' ny alalan' ny fanoratana boky i Bahāʾ-Allāh ka ny tena manan-danja indrindra amin' izany dia nosoratany tao amin' ny fonjan' i Acre, dia ny Kitāb-i Aqdas ("Boky Masina indrindra"). Tao Edirne tamin' ny taona 1868 dia nandefa ny hafatra voasoratra ho an' ireo mpitondra malaza tamin' ny androny izy, isan' izany ny shah tao Iràna, ny tsar Alexadre II tao Rosia, ny mpanjakavavy Victoria tany Angletera, ny emperora Guillaume I, i Napoléon III ary ny papa Pio IX, izay namporisihiny hametra ny fitaovam-piadiany sy hanao izay hahatanteraka ny fandriampahalemana ho an' ny rehetra sady maharitra ary mahenika an' izao tontolo izao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Baháʼu%27lláh&oldid=1001631"